Miyuu Lautaro Martinez Albaabka ka xirtay Kooxda Barcelona? … (Laacibka reer Argentina oo ugu dambeyn afka kala furay) – Gool FM
Miyuu Lautaro Martinez Albaabka ka xirtay Kooxda Barcelona? … (Laacibka reer Argentina oo ugu dambeyn afka kala furay)
(Milan) 01 Feb 2021. Haddii dhibaatooyinka Barcelona ay ka sii dari karaan iyo haddii kale, Lautaro Martinez ayaa u soo baxay si uu u muujiyo inuu wadahadallo qandaraas kordhin ah kula jiro Kooxdiisa Inter Milan.
Xiddiga reer Argentine ayaa ka mid ahaa bartilmaameedyada ugu sarreeya ee Blaugrana intii lagu jiray suuqii xagaaga, laakiin dhibaatooyinkooda dhaqaale ayaa ka hor istaagay inay u dhaqaaqaan.
“Waxaan eegeynaa qandaraas cusboonaysiinta Inter,” ayuu Lautaro u sheegay Warsidaha la yiraahdo DAZN.
“Waan ku faraxsanahay halkaan, kooxda marwalba si fiican ayaan ula qabsaday.
“Antonio Conte kalsooni ayuu igu qabaa.
“Waxaan isku dayi doonaa inaan bixiyo wax walba oo karaankeyga ah, kaddib wax walba oo kale meesha ayay ku dhammaan doonaan.”
Hadalka Lautaro wuxuu imanayaa isla isbuucaan, markii faahfaahinta dakhliga qandaraaska ee Lionel Messi kooxda Barcelona ay daabacday Jariiradda El Mundo.
Kooxda uu hoggaamiyo Macallin Ronald Koeman ayaa guushii 2-1 ee ay xalay ka gaaraa Athletic Club waxa ay ku hoggaamisay inay soo degaan kaalinta labaad, iyagoo 10-dhibcood ka dambeeya hoggaamiyeyaasha horyaalka La Liga ee Atletico Madrid.
Manchester United oo burburinaysa heshiiska mid ka mid ah xiddigaheeda... (Kooxdee ayuu ku biiri doonaa?)